China Car Air lokucoca ulwelo for OEM NO.1500A023 1444RU mveliso kunye nabenzi | Chuangqi
Isihluzi soMoya soMoya se-OEM NO.1500A023 1444RU
Iifilitha zomoya ezimdaka aziyi kuvumela umlinganiso ofanayo womoya kwiinjini njengoko ucocekile.
Injini ethintelwe umoya iya kusokola ekuphulukaneni nokusebenza kwaye itye ipetroli engaphezulu.
-Iincinci ezincinci zothuli okanye isanti zinokubangela ukonakala kumalungu angaphakathi anje ngeepiston kunye neesilinda.
-Ukutshintsha rhoqo izihluzi zomoya yindlela engabizi kakhulu yokwandisa ubomi benjini.
Uhlobo: Icebo lokucoca ulwelo lomoya
Izixhobo: Environmental PP / DB + Non womluki Ilaphu
Umbala: mhlophe; mnyama okanye ngentando yakho
UBungakanani Ubude: 268, Ububanzi: 184.5, Ukuphakama: 54
Imibhalo: 1,100% Engalukwanga
2.Ukusebenza ngokuhlengahlengiswa ngaphezulu kwe-99%.
Indawo yokuQala Hebei, China (kwilizwekazi)
Amandla okubonelela 50000 iiPC / ngenyanga
Isiqinisekiso seNkampani ISO / TS16949; ISO9001: 2000
Ulwenziwo Uyilo loMthengi, iimfuno kunye neelogo zamkelekile.
Ukusebenza okungcono kunye nokuSebenza:
Izifundo zibonise ukuba uqoqosho lwamafutha lunokuphuculwa nge-14% ngesihluzi somoya esicocekileyo.
Isihluzi somoya seConqi siphucula umgangatho kunye nobungakanani bomoya ococekileyo ongena kwi-injini, oku kuphucula ukusebenza kweinjini kunye nokusebenza ngokukuko.
UkuKhuselwa kweNjini ePhakamileyo kunye nokuSebenza kweNjini okuPhuculweyo ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-99 zomoya ococekileyo ngaphambi kokuba ungene kwiinjini yemoto.
Umthamo ophezulu wemithombo yeendaba yokuhluza umoya yokususa amasuntswana anobungozi njengothuli, umungu, kunye nokunye ukungcola ngelixa kubonelela ukuhamba komoya okuphezulu, okungathinteli ukuhamba komoya, ukuqinisekisa ukusebenza kweinjini okufanelekileyo okuphucula iikhilomitha zemoto ngegaloni nganye.
Iyahambelana neMitsubishi ASX, Lancer, Outlander, Outlander Sport, RVR. Uyilo oluchanekileyo, lwenziwe ngobunjineli, kwaye lwavavanywa ukuhlangabezana kunye nokudlula zonke iimfuno zecebo lomoya lweMITSUBISHI OE.
Isihluzi somoya seConqi silungile ngaphakathi ezindlwini ngokokuyilwa kwe-OE
Izibonelelo ezininzi ze Conqi Iifilitha zomoya
Iifilitha zomoya zokucoca ulwelo lwePrimiyamu zandisa ukuhamba komoya ococekileyo kwiinjini ukuze kuphuculwe ukusebenza kweinjini kunye namandla.
* Iimeko ezithile zinokubuchaphazela ubomi becebo lokucoca ulwelo. Izizathu ezinokubangela ukutshintshwa rhoqo zibandakanya:
Iindlela ezixineneyo kunye neendawo ezinabantu abaninzi
Izikhombisi eziqhelekileyo liXesha lokuFilitha iInjini yakho yomoya
Ukukhanya kweNjini kuza: Iimoto ezininzi zixhotyiswe ngenzwa yokuhamba komoya ecima ukukhanya kwenjini.
Uvavanyo olubonakalayo: Iifilitha zomoya zeConqi zimhlophe ukuze ubone ukuba zingcolile. Jonga umphandle kunye nomaleko wephepha lokucoca uthuli kunye nenkunkuma.
Ukunciphisa uQoqosho lwe-Fuel:Xa iinjini zifumana ioksijini encinci, zisebenzisa ipetroli eninzi. Ukuba uqaphela uqoqosho lwepetroli luyehla, unokufuna ukubuyisela isihluzi somoya.
Injini iyanelisa:Unikezelo lomoya othintelweyo lubangela ukuba amafutha angatshiyo aphume kwiinjini njengesalela. Umlotha uqokeleleka kwiiplagi, ezinokubangela ukuba injini idubule.
Ukunciphisa amandla ehashe:Ukutshintsha isihluzo somoya kunokuphucula ukukhawulezisa okanye amandla ehashe. Ukuba imoto yakho ayiphenduli kakuhle okanye ijezi xa unyathela isantya, injini isenokungafumani moya ekufuneka uyenzile.
Umsi omnyama weSotyoti okanye iiFlamme:Ukubonelela komoya okungalunganga kunokubangela ukuba ipetroli ingatshi ngokupheleleyo ngexesha lomjikelo wokutsha. Amafutha angatshiyo aphuma emotweni ngombhobho wokukhupha, onokubangela umsi okanye amadangatye.
1. Gxila kwimveliso yokuhluza imoto ekhuphisanayo kubaxumi bethu ukuze badibane neemarike zabo, babonelele ngolwazi lobungcali ngemveliso yeemveliso.
2. Amava atyebileyo ekuthumeleni kwelinye ilizwe izihluzi zemoto kunye ne-spark plugs eziya eYurophu, e-United States, eRashiya, eMexico, eMntla Melika, kwi-Mpuma ye-Asia, nakwamanye amazwe, siyazi ngemakethi yabo yasekuhlaleni kunye nokususwa kwamasiko kwaye singakunika iingcebiso zokungenisa elizweni.
Isiqinisekiso seTrade ukuze kuqinisekiswe ukuthembeka kwethu, emva koko sifezekise imeko yokuphumelela.
Egqithileyo Ukubonelelwa koMvelisi weKhwalithi ephezulu yoMoya oyi-OE NO 2730940404 1120940004
Okulandelayo: Icebo lokucoca ulwelo ngokuzenzekelayo lababini MME61701 MZ341012EX MN185231 MR398288 MZ600143 MZ690361 XR398288
Icebo lokucoca umoya laseAsiriya
Icebo lokucoca ulwelo lomoya Hino Iinkuphelostencils
Icebo lokucoca ulwelo ngesithuthuthu
Icebo lokucoca ulwelo lweMoto kwiToyota
Isihluzi seHonda Air